Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea ay xalay guuldarrada kala soo laabtay garoonka Anfield – Gool FM
(Liverpool) 15 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xalay guuldarro kala soo laabtay garoonka Anfield oo ay ku booqatay Liverpool.
Liverpool oo soo dhoweysay Chelsea kulan ka tirsan Premier League ayaa kaga soo badisay 2-0, waxaana labadaasi gool u kala dhaliyey Mane 51-daqiiqo iyo Salah 53’daqiiqo.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa rigoorradii laga diiwaan geliyey guuldarrada ay Chelsea kala soo kulantay Liverpool:-
>- Mane ayaa 21 gool tartammada oo dhan u dhaliyey kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan 2018-19, waxaana heerkiisii ugu fiicnaa oo uu ka sameeyo hal xilli ciyaareed kubadda cagta Ingiriiska.
>- Salah ayaa goolkiisii ugu horreeyey ka dhaliyey meel ka baxsan xerada ganaaxa kulan Premier League ah markii ugu horreysay tan iyo bishii Janaayo 2018, markaasoo uu ugu shubay naadiga Manchester City.
>- Mohamed Salah ayaa soo gabagabaeeyey abaartii gool la’aanta ee ugu dheereyd oo ku haysatay garoonka kooxdiisa Liverpool, isagoo aan Anfield gool ku dhalin shan kulan oo uu ku ciyaaray, isagoo goolkii ugu horreeyey ku dhaliyey guriga kooxdiisa tan iyo 9 bishii Febraayo.
>- Liverpool ayaa guushii ugu horreysay garoonkeeda Anfield kaga gaartay Chelsea tan iyo sanadkii 2012-kii.
>- Labada gool oo ay kulankan Mane iyo Salah ka dhaliyeen kooxda Chelsea waxaa u dhaxaysay kaliya 142 ilbiriqsi.
Kaddib guushii ay ka gaartay Crystal Palace, Manchester City oo rikoor u dhigtay kooxaha Yurub